Aiza ary oviana no tena mihaona ireo VIP ambony ao amin'ny tsenan'ny dia?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Aiza ary oviana no tena mihaona ireo VIP ambony ao amin'ny tsenan'ny dia?
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • People • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK • WTN
Ny Cocktail WTTC ao amin'ny Chesterfield Mayfair any Londres dia hetsika manokana ho an'ireo VIP ambony amin'ny indostrian'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany manerantany. Anio alina, 2 Novambra no fotoana voalohany nifankahitan’ny mpitondra – ary feno hipoka izany.
Ny Hotely Chesterfield Mayfair any Londres no toerana nihaonan'ireo mpitarika ny fizahantany nandritra ny 20 taona mahery ho an'ny WTTC Cocktail amin'ny takariva faharoa amin'ny tsenan'ny fitsangatsanganana eran-tany.
Androany alina, taorian'ny 2 taona, afaka nivory ireo mpitarika ny fizahan-tany, nanadino ny saron-tava, ary nihaona.
Anita Mendiratta no nisolo tena ny UNWTO. Tsy teo ny Sekretera Jeneraly.
Nandritra ny 20 taona mahery, ny fisakaizana sy ny fandraharahana dia nanomboka na nitohy tao amin'ny trano fandraisam-bahiny 5 kintana akaikin'i Greenfield any Londres, ny Hotely Chesterfield Mayfair.
The Fikambananan'ny fizahan-tany sy fizahantany eran-tanyl isan-taona mandritra ny World Travel Market dia manasa mpikambana, minisitra, ary VIP hafa ho any amin'ny hotely mba hahazoana divay, champagne ary tsakitsaky.
Iray amin'ireo hetsika notakina indrindra teo amin'ny sisin'ny tsenan'ny fitsangatsanganana manerantany.
Ity hetsika anio alina ity dia fotoana tsara ho an'ny tale jeneralin'ny WTTC vaovao Julia Simpson, hiresaka amin'ireo mpikambana, minisitra ary vahiny. Izy no nitondra ity fikambanana misolo tena ny 200 amin'ireo orinasa lehibe indrindra eo amin'ny sehatry ny fizahantany sy ny fizahantany.
Anisan’ny nasaina ny minisitry ny fizahantany avy any Jordania, Barbados, Jamaika ary Filipina.
Filipina no ho mpampiantrano ny fihaonambe WTTC manaraka amin'ny 2022.
Juergen Steinmetz, mpanonta eTurboNews ary Filohan'ny WTN, nanatrika ity hetsika ity ary naka ity lahatsary fohy ity:
Ny fizahantany dia momba ny olona, ​​​​fa koa momba ny raharaham-barotra - ary aseho amin'ity cocktail WTTC ity.
Fai Mission Organisations hoy:
November 3, 2021 amin'ny 10: 41
Manohy mandre aho fa diso fanantenana ireo mpamatsy amin'ny fangatahan'ny mpanolotsaina amin'ny "VIP" ny mpanjifany nefa tsy mahazo ny antsipiriany momba ny tena hatao. Ny Travel & Adventure Show Series dia fahafahana ara-barotra ara-barotra efa voasedra sy noheverina fatratra. Asandrato ny marikao amin'ny seho fitsangatsanganana!